Previous Article Gọọmenti Anambra Na WHO Enyela Ndị Ọdekpe Nkuzi Maka Iju Mmiri • Nye Ha Ọgwụgwọ n'efu
Next Article E Nyela Ndị Ntorobịa Ọzụzụ, Kesaarala Ha Ihe E Ji Agba Ọgwụ Ahụhụ n'Anamba
Opekampe mmadụ dị puku ise si na obodo iri ise na asatọ ebe ụlọọrụ OML nọ ga-erita erere ọnọdụ ahụike n'efu nke ụlọọrụ ahụ si mba France were bịa bụ, Total Exploration and Production Nigeria Limited.
Ya bụ ile ọnọdụ ahụike n'efu, bụ nke a ga-eme izuụka abụọ, ga-agụnye ile ahụ, ịwa ahụ na inye ọgwụ dị iche iche maka ụdị ọya ọ bụla.
Onyeisi Njem Nkwalite Ahụike a, Marnifield Nigeria, na onye na-ahụ maka ọganihu Ọnọdụ Ahụike n'efu nke ndị TEPNG, Dọkịta Akubuike Okara, bụ onye kwuru okwu na mmepe nke nkwalite ahụike ahụ n'efu, emere n'ụlọ ọgwụ izugbe dị na Erema, n'okpuru ọchịchị Ogba/Egbema/Ndoni, Steeti Rivas, kwuru na ụlọọrụ mmanụ ahụ jiri ọnọdụ ahụike ndị ọrụ ha, ezinaụlọ na ndị obodo ha nọ na be ha were kpọrọ mkpa.
O kwuru, "N'ime abalị abụọ nke mmemme a, ndị ọrụ ahụike Marnifield ahụla mmadụ narị asatọ na iri. Ihe dịka mmadụ iri asatọ na isii ahụ adịghị bụ ndị a chọpụtara na a ga-awa ahụ, ebe iri abụọ na otu n'ime bụ ndị awagoro ahụ.
"Ndị na-ahụ maka anya ahụla mmadụ narị abụọ na iri isii na otu, na ugogbe eji agụ ihe dị narị abụọ na iri na otu bụ nke ekesarala ka e mechara nnyocha n'anya ndị ahụ. Anyị na-atụ anya na tupu mmemme a agwụ, ihe karịrị mmadụ puku ise bụ ndị a ga-ele ahụ site n'aka ndị ọrụ ahụike ụlọọrụ ahụ.
Ma mbụ, osote onyeisi ụlọọrụ Total Exploration and Production Nigeria Limited, ngalaba Port Harcourt, Maazị François Le-Cocq, kwuru na ọ bụrụla omenala ka ụlọọrụ mmanụ ahụ na-aga n'iru ibu ụzọ n'ịkwalite ọnọdụ ahụike site n'ọtụtụ ọgbakọ dị iche iche.
Le-Cocq tinyere na ụlọọrụ ahụ emela ka obodo ahụ ha nọ na ya rita erere ahụ na obodo ndị gbara ha agbataobi site n'ọtụtụ ọgbakọ igbochi na ịgwọ ọnọdụ ahụike obodo ahụ site na ịgwa ọhaneze maka ibi ezi ndụ ahụike, ezi ụzọ iji zụlite nwa, ịkọwa maka ọrịa o biri àjà ọcha, ezi ọzụzụ nke ndị ọrụ ụlọọgwụ ime obodo.
"Dịka ụlọọrụ, anyị kwenyere n'okwu ahụ zuru ọha ọnụ nke kwuru na,"mmadụ nwere ahụike na-ewulite obodo nwere ego". Nkwenye a mere anyị na-aga n'ihu n'ọrụ njikọ ọnụ a iji were metụ ihe dị ndị mmadụ mkpa ma nyere ha aka igbochi na ịgwọ ụdị ọrịa dị iche iche site n'ịchịkọta ụdị ọgbakọ a na nke gọọmenti n'agbanyeghị aka mgba ha na enweta.
"Anyị kwenyere na ọrụ a enyerela ọtụtụ mmadụ na ezinaụlọ aka, bụ ndị na-agaghị enwe ego ọnọdụ ahụike dị mma n'ụlọ ọgwụ nke onwe, karịsịa dịka ụlọ ọgwụ ndị gọọmenti nwere ọtụtụ ihe aka mgba chere ya na steeti anyị."
N'okwu ya n'aha ndị ritara erere a, onyeisioche Mmepe Obodo Erema, Maazi Ben Chileke, toro nnukwu ụlọọrụ France ahụ maka iweta ezi ọnọdụ ahụike n'efu n'obodo ahụ.